Bhutan: Ny Pretra no nanjary nidiran’andro voalohany noho ny Didy mandrara ny fihinana paraky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2011 11:25 GMT
Miankina amin'ny fomba fijerinao azy ihany izy ity, pretra Bodista izay nosamborina tamin'ny faran'ny volana Janoary raha iny izy niditra ny firenena iny niaraka taminà fonosana Baba miisa 72, no sady paraky fihinanana avy any Inde no mpandika lalàna voalohany na ny nidiran'andro voalohany noho ny Didy mikasika ny Paraky any Bhutan izay tenananan-kery nanomboka ny volana Janoary 2011.
Nanomboka hatreo, dia notanana tsy nisy didy i Sonam Tshering (23) mandra-pahazoany ny didim-pitsarana nanagadra azy mandritra ny telo taona tamin'ny 2 Martsa. Nanaraka akaiky ity tranga ity ny haino aman-jery Bhutanese, ary anisan'izany ny mpitoraka bilaogy. Pejy Facebook iray mitondra ny lohateny hoe”Avaozy ny Lalàna mifehy ny Paraky” ihany koa no natsangana hanoherana ity Didy ity. Nolazaina fa nilaza ny Praiministra hoe niainga avy amin'ny zava-niseho tany Tonizia sy Ejipta ity pejy ity.
Ny didy fanapahana navoakan'ny Fitsarana Ambony tsy ela akory izay, momba ny tranga voalohany amin'ny Lalampanorenana ao Bhutan, izay nanome rariny mpikambana 2 avy amin'ny mpanohitra manohitra ny governemanta ankehitriny dia nanaporofo tamin'ny vahoaka ny fahafenoan'ny rafi-pitsarana. Na izany aza, betsaka ny fanapahana/didy – avy amin'ny lalàna – no tsy mahafaly ny olona. Ny sasany amin'izany dia sazy mafy tahaka ny fampidirana 3 taona an-tranomaizina ho an'ny fandikan-dalàna maivana toy ny disadisa na tsy fifankahazoan-kevitra na ny fandikana ny didy momba ny zava-mahadomelina.
Na izany aza, niverina teny amin'ny Tribonaly ny raharaha taorian'ny nandefasana taratasy tsy fanta-piaviana teny amin'ny Komity misahana ny ady amin'ny kolikoly izay natsangan'ny Mpanjaka fahaefatra any Bhutan hanajanonana ny kolikoly toy ireo. Miandry daholo ny olona rehetra amin'izay hitondran'ny Fitsarana azy ity. Ary indrindra amin'izao andron'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izao, dia andrasana tokoa ny zavatra toy izao – fanehoan'ny olona ny fihetseham-pony sy ny heviny.
Nanoratra amin'alahelo eo amin'ny bilaoginy ny mpikambana iray ao amin'ny Parlemanta, Sangay Khandu:
Etsy andanin'izany, manantena ireo Bhutanese vitsivitsy tezitra fa hanafoana ny didy ny governemanta. Nilaza ny mpitoraka bilaogy Jurmi Chhowing izay namoaka isan'andro ny sariny mandrehitra sigara eo amin'ny Facebook hoe:
Na izy aza nanoratra taratasy tany amin'ny pretra nangataka ny hanaovana ny sazy ho telo taona fisintahana fandinihan-tena izay fanirian'ny mpino Bodista. Namaly i Manju Wakhley:
Betsaka no mitaraina mikasika ny fanomezan-danja tsy araka ny tokony ho izy ny fifohana sigara raha oharina amin'ny famonoana olona noho ny alikaola, izay tafakatra maherin'ny 50 isanjaton'ny olona any amin'ny hopitalin'i Thimphu. Nilaza antony hafa mikasika ny maha avo ny tahan'ny fahafatesana i Kinga Sithup :
Marina mihitsy hoe anisan'ny niteraka ny fanimbana goavana indrindra ny afo tany Bhutan. Nefa dia manamarina ny lalàna nampiharina ve izany, ny hevitra nitondrana azy izay toa avy any Bumthang, anefa ny ankamaroan'ny afo dia avy amin'ny lampin-tsolika sy avy amin'ny tsy fihetezan'ny tariby mitondra herin-aratra/na afo ateraky ny fahatapahan'ny tariby mitondra herin'aratra noho ny sigara. Ohatra iray vao haingana izao i Bajo fire ary nilaza ny fanadihadiana natao mikasika ny afo any Bumthang fa mety ho ny labozia no nahatonga izany.
Jereo inona no nosoratako tamin'ny herintaona…
Ary nanoratra Dechen Roder, mpanao sarimihetsika tanora iray hoe
Nandeha mihitsy aza moa ny vehivavy tanora iray Cee Dee Jamtsho, nitsidika ny pretra tanora :
Nihaona tamin'ny rain'ny gadra mihitsy aza izy ary nandika ny ny zavatra tiany holazaina.